Vatsvakurudzi zvakakonzera makombiyuta vanhu kuti kuedza pachivande kunoona Websites vakanga akafunga kuti chakavharwa utongi hurumende.
Muna March 2014, vaongorori vakatanga encore, hurongwa kupa-chaicho nguva uye kuyerwa pasi pose Internet kusenza. Kuti tinzwisise sei vakashanda, ngatitaurei nezvazvo panotaurwa wako pachako webpage (kana usina munhu, unogona kufungidzira shamwari yako). Imwe nzira kufunga webpage wako sezvo purogiramu yepakombiyuta rakanyorwa mumutauro HTML. Kana rokushandisa anoshanyira website yako, kombiyuta yake Downloads purogiramu yako HTML uye ipapo ichiti paari chidzitiro. Nokudaro, webpage wako purogiramu anokwanisa kufurira makombiyuta vamwe vanhu kutevera vamwe anoita mirayiridzo. Saka, vatsvakurudzi, Sam Burnett uye Nick Feamster, vakanga vari Georgia Tech, vakakurudzira Website varidzi hwokugadza duku remitemo snippit kupinda webpages dzavo:
Kana ukashanyira mumwe webpage iri romutemo snippit mairi, pano ndizvo zvichaitika. Nepo yenyu padandemutande mubrowser yakanga ichitsemura kuti webpage, bumbiro remitemo snippit huchaita kombiyuta yako kuedza kutaura website kuti vaongorori vakanga vachiongorora. Somuenzaniso, zvinogona kuva Website enyika akarambidzwa bato kana kutambudzwa boka rechitendero. Zvadaro, kombiyuta yako zvichaita kuzodzoka vaongorori pamusoro kana akakwanisa kutaura dzingadai makavhara Website (Figure 6.2). Uyezve, zvose izvi zvaizova asingaoneki kwamuri kana ivo aitarisa HTML panobva faira pamusoro webpage yenyu. Kwakadaro usingaonekwi chechitatu-Bato peji zvikumbiro zviri chaizvoizvo zvikuru zvakajairika padandemutande (Narayanan and Zevenbergen 2015) , asi ivo Kashoma inosanganisira yakajeka kuedza kuyera kusenza.
Figure 6.2: Schematic pamusoro kutsvakurudza akaitwa encore. Mavambo Website anotumira newe webpage akanyorwa HTML duku remitemo snippet midzi mauri (padanho 1). kombiyuta yako rinoshandura webpage, izvo zvinokonzera nokuyerwa basa (danho 2). kombiyuta yako kuedza kuwana kuyerwa chipfuro, izvo zvinogona kuva Website enyika akarambidzwa boka (danho 3). A aongororwe, akadai hurumende, kuti ipapo kumisa dzenyu kuwana nokuyerwa chipfuro (danho 4). Pakupedzisira, kombiyuta yako inoshuma migumisiro chikumbiro ichi kuna vaongorori (kwete kuratidzwa nomufananidzo). Figure kubva Burnett and Feamster (2015) .
Izvi rine zvimwe anokwezva zvikuru michina ehupfumi kuti kuyera kusenza. Kana Websites yakakwana wedzera ichi bumbiro snippit, ipapo vaongorori vanogona kuva-chaiyo nguva, pose-pose chiyero izvo Websites vari akaongororwa iyo nyika. Asati nezvekutanga basa, vaongorori ataurirana IRB pana Georgia Tech, uye IRB payakaramba kudzokorora basa nokuti haana "munhu vanotongwa tsvakurudzo" pasi Common Rule (the Common Rule ndiyo mitambo yemirau vedare zvikuru federally-mari tsvakurudzo muna US, mamwe mashoko, ona Historical Okuwedzera pakupera chitsauko chino).
Zvisinei, nokukurumidza pashure encore kwakatangwa, vaongorori vakanga neZvapupu Ben Zevenbergen, ipapo kudzidza mudzidzi, uyo akarera mibvunzo pamusoro nezvetsika nechirongwa. Kunyanya, paiva kunetseka kuti vanhu vamwe nyika yaigona pachena pangozi kana kombiyuta yavo akaedza kushanyira dzimwe Websites nehanya, uye vanhu ava vakanga vari kutarisana nengozi haana kubvuma ndiitewo kudzidza. Kubva pane kukurukurirana aya, encore chikwata dzakachinja chirongwa chete kuedza kuyera kuongororerwa Facebook, Twitter, uye YouTube nokuti yechitatu vebato oedza kuwana nzvimbo izvi zvinowanzoitika panguva dzose padandemutande Browsing (semuenzaniso, mumwe webpage ane Facebook Like Button zvinokonzera chikumbiro chechitatu-vebato kuna Facebook).
Pashure nekunhonga date vachishandisa ichi zvakachinjwa design, pepa achirondedzera nzira uye vamwe nemigumisiro akanga vakabvuma SIGCOMM, yepamusoro kombiyuta resayenzi musangano. Chirongwa komiti chaizvo hwokugadzira mupiro bepa, asi akaratidza kuti kushaikwa omuzvarirwo kubva kuvatori vechikamu. Pakupedzisira, purogiramu dare yakasarudza kubudisa pepa, asi ane kusaina mashoko achitaura chemufungo nezvokunetseka (Burnett and Feamster 2015) . Akadaro kusaina mashoko kwamboitwa kushandiswa kare panguva SIGCOMM, uye nyaya iyi kwakaita kuti dzimwe gakava nemasayendisiti kombiyuta pamusoro pezvakaita wezvetsika pakutsvakurudza yavo (Narayanan and Zevenbergen 2015) .